Azonao atoro ahy ve ny fomba hananganana raharaham-barotra ho an'ny orinasa fivarotana maimaim-poana?
Tahaka ny any amin'ny backlinks hafa ho an'ny tanjona SEO, ny tolotra momba ny raharaham-barotra momba ny raharaham-barotra dia mihodinkodina eo amin'ny tanjona iray ihany - mitombo ny fitohanan'ny fifamoivoizana mankany amin'ny tranokalanao mivantana avy amin'ny fikarohana biolojika.Tsy ilaina ny filazana fa ny rindranasa ampiasain'ny Google dia mety ho ny toetoetrany matanjaka indrindra. Izany no antony ilàna ny fandinihina tsara ny fananganana lozisialy avo lenta izay hanohana ny tetik'ady ara-barotra sy ny fampiroboroboana ankapobeny. Andao hiatrika izany - ny fananganana fandraharaham-barotra mankany amin'ny fivarotana raharaham-barotra dia mitaky fotoana sy ezaka be. Na dia izany aza, mety ho mora ny manomboka - ary mihodina tsikelikely mankany amin'ny fitarihana sy manatanjaka ny sainao amin'ny fikarohana an-tserasera - nudo gordo de corbata. Mankanesa amin'ireto lalana mahagaga an-jorony ireto. Raha vao nandramanao daholo izy rehetra, dia tsidiho ny fangatahana fomba fanao mahazatra hafa hanamboaranao raharaham-barotra amin'ny tranokala. Noho izany, ireto misy fomba maromaro tena tsotra nefa mbola mahomby mba hahatonga ny tranokala fandraisam-bahiny hijanona ivelan'ny fifaninanana - tsy mandany vola.
Local Citations sy Business Directories
Manoro hevitra aho amin'ny fampiasana citations eto an-toerana, lisitry ny tranonkala, ary lisitra an-tserasera ho fanombohana "kickass" Business backlinks. Izany dia toerana mety tsara hanombohana ny fahazoana mibaribary amin'ny Internet. Raha ny marina, ny ankamaroan'ireo tolotra fitateram-pandrafetana ireo dia mipetaka tsara amin'ny fitaovam-pikarohana lehibe toy ny Google. Noho izany, ny zavatra rehetra ilainao dia ny manonona ny anaran'ny orinasa miaraka amin'ny angon-tserasera ary hahazo izany miverimberina miverimberina izany. Ny ohatra tsara indrindra dia ny Google My Business, Yellow Pages, Yelp, Bing Business Listing, Truelocal, sns.
Ireo toerana be olona ireo dia tena ilaina tokoa amin'ny fananganana fanatanjahana eo amin'ny aterineto ho an'ny raharaham-barotrao ary ny fampahalalana ny marikao dia miharihary amin'ny mpihaino marobe amin'ireo mpampiasa mavitrika. Ny zavatra rehetra ilainao hakana rohy amin'ny haino aman-jery sosialy dia mamorona profil sosialy amin'ny orinasa - ary vita ianao. Ataovy azo antoka ny miara-miasa amin'ny tetikasa momba ny raharaham-barotra sy ny fitohizanao - aza misalasala ny mampiasa vola mandritra ny fotoana fohy hanoratana lahatsoratra tsy tapaka mba havoaka amin'ny rohy mivantana mankany amin'ny tranokalanao fandraharahana lehibe. Amin'izany fomba izany, tsy vitan'ny hoe mahazaka backlinks fotsiny ianao, fa mandray soa avy amin'ny fifamoivoizana amin'ny Internet.
Ny famoahana gazety sy ny famahanam-bolongana Guest
Na dia tsy dia takatry ny saina loatra aza ny fomba amam-panao taloha momba ny fandraharahana ara-barotra amin'ny raharaham-barotra raharaham-barotra, manompo anao tsara. Mahagaga fa afaka mahita foana ireo tranonkala malaza manerantany ianao mangetaheta votoaty vaovao. Ny zavatra dia miaraka amin'ny famoahana gazety an-tserasera amin'ny lohahevitra mafana mifandraika amin'ny orinasa orinasa na orinasa fivarotana - azonao vetivety ny fiarahamonin'ny mpanao gazety sy ny blaogera ao an-toerana noho ny fisalasalana be dia be. Mba hanaparitahana izao tontolo izao amin'ny famoaham-baovao avoakanao, manoro hevitra aho hifantoka amin'ny fampiroboroboana vokatra vaovao iray na serivisy mba hahafahanao mamadika ny làlana mankany amin'ny tranokala fandraharahanao lehibe indrindra ho an'ny fampahalalana fanampiny. Tahaka ny famoaham-baovao amin'ny gazety, ny bilaogy vahiny dia mendrika handany fotoana - dia azo antoka fa handoa vola! Azafady fotsiny ny zava-drehetra mifandraika amin'ny tompon'andraikitra mahery vaika na tompona bilaogy - ary apetaho ny lahatsoratra mifanaraka aminao mba hahazoana loham-pejy ho setrin'izany. Mariho fa eo anivon'ireo fitaovana hafa mahasarika ny fananganana rohy, ny blaogin'ny vahiny dia TSY MISY ho an'ireo mitady ny "backlinks" ambony amin'ny DOFollow. Ataovy izay hahazoana antoka fa hanoratra ianao ho an'ny bilaogy manan-danja iray manan-danja amin'ny laharana PR.